ဒီဖြစ်ရပ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် ဖြစ်သွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ပွေးလေဆိုသည့် အမျိုးသမီးငယ်သည် သေဆုံးသူ မစ္စတာ Chidchai အသက် ၇၆ နှစ်၏ အိပ်ခန်းထဲတွင် အဝတ်အစားဗလာ ဘီယာပုလင်းခွံများနှင့် အတူ ရောက်ရှိနေခဲ့ခြင်းပါတယ်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာ သေဆုံးသူ မစ္စတာ Chidchai အသက် ၇၆ နှစ်၏ နေအိမ်တွင် ပွေးလေ ဆိုသည့် အမျိုးသမီးသည် အဝတ်အစား ဗလာနှင့် ရောက်ရှိနေခဲ့ခြင်းပါ။
သေဆုံးသူ မစ္စတာ Chidchai အသက် ၇၆ နှစ်၏ အလောင်းအား ဆေးရုံသို့ သယ်ဆောင်ပြီး ဆေးစစ်ချက်ယူရာ သုတ်ထွက်လွန်ပြီး သေးဆုံးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်ဟု အတည်ပြုချက်ထုတ်ထားပါတယ်။
တရာခံ အသက် ၂၇ အရွယ် ပွေးလေ ဆိုသည့် အမျိုးသမီးအား ထိုင်းနိုင်ငံ တရားရုံး တစ်ခုမှာ လူသတ်မှု ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေမှု တို့နှင့်အတူ တရားစွဲဆိုထားကြောင်း ထိုင်းလူမှုကွန်ယက်များမှ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
Posted by Than Zaw Htet at 1:54 AM0comments
အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန္ဒဖြေဖျောက်တဲ့ အကျင့်
အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန္ဒဖြေဖျောက်တဲ့ အကျင့် (အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ ) Masturbation ဆရာရှင့် ကျမ အခု ရောဂါတခု ခံစားနေရလို့ စိတ်ပူလို့ ဆရာ့ကို မေးတာပါ ရင်ဖွင့်တာပါရှင့်။ ကျမ အသက်က ၃၂ နှစ် ရှိပါပြီ။ အပျိုပါရှင့်။
Posted by Than Zaw Htet at 1:28 AM0comments
အဆိုတော် အစ္စဏီအမှု ရုံးပြောင်းစစ်ဆေးဖို့ လျောက်ထားမှု လက်ခံသင့် မခံသင့်
မော်ဒယ်ရည်းစားဟောင်းကို အဓမ္မပြုကျင့်တယ်ဆိုပြီး တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ အဆိုတော်
အစ္စဏီရဲ့အမှုကို လာမယ့် ဇူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့မှာ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ အမှုလက်ခံသင့် မခံသင့် ကြားနာစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by Than Zaw Htet at 1:11 AM0comments
ရေသန့်မရလို့ ၅ နှစ်အောက် ကလေး ၃ ထောင်ကျော် နှစ်စဉ် သေဆုံးရ
Pho Thu Taw | ဖိုးသူတော်
အံ့ဖွယ်​​ကျောင်းဒါယကာ (သို့မဟုတ်​) ​ရွှေကူမြို့နယ်​ မံဝိန်းရွာမှ ​ကျောင်းဒါယကာ ဆင်​တစ်​​ကောင်​အ​ကြောင်း
ပဏာမ ကစားသမား ၂၆ ဦးစာရင်း နည်းပြ အန်တွမ်နီဟေး ထုတ်ပြန်
Myanmar Gazette News
၀ိသုဒ္ဓိမဂ် ဉာဏဒဿန၀ိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း(၂) - ၁၃
Buddhism ကိုတကယ်ယုံကြည်ပါသလား ?
ဒီဘလော့လေးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာရိပ်အောက်မှာ တည်ရှိပါသောကြောင့် ရောက်လာသူအားလုံး အေးချမ်းသာယာရှိပါစေ။
Follow by Email To My Post
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မုဒိမ်းကျင့်ရာ...
အဆိုတော် အစ္စဏီအမှု ရုံးပြောင်းစစ်ဆေးဖို့ လျောက်ထားမ...
An Nyong Sa Yo
Than Zaw Htet
Chat with Than Zaw Htet
Thanks you for visiting to thanzhtet.blogspot.com. Powered by Blogger.
Translate To Posts
Copyright (c) 2010 သန်းဇော်ထက် . Design by WP Themes Expert